Adverity: Unganidza, Gadzirisa, uye Ongorora Yako Yekutengesa Dhata | Martech Zone
Hupombwe: Batanidza, Gadzirisa, uye Ongorora Yako Yekutengesa Dhata
Chipiri, Mbudzi 12, 2019 Chipiri, Mbudzi 12, 2019 Douglas Karr
Imwe purojekiti yandiri kuenderera mberi nekushandira mumwe wevatengi vangu kuvaka mahedhibhodhi ekutengesa ayo anopa imwe chaiyo data yekuita zvisarudzo pairi. Kana izvo zvichinzwika zviri nyore, hazvisi chaizvo.
Hazvisi nyore. Kwese kutsvagurudza, zvemagariro, ecommerce, uye analytics chikuva vane yavo nzira dzekutevera dhata - kubva pakubatana pfungwa kusvika kudzoka kana vashandisi vezvino. Kwete izvozvo chete, asi mapuratifomu mazhinji haatambe zvakanaka nekusunda kana kudhonza dhata kune mamwe mapuratifomu. Ngatizvitarisei… mukwikwidzi akaita saFacebook haasi kuzovaka chinongedzo kuGoogle Data Studio kuitira kuti vanhu vagone kubatanidza yavo yemagariro uye analytics dhata ipapo.
Yese huru chikuva ine nzira yekuburitsa dhata kuburikidza neAPI yavo, hazvo, uye kune mapuratifomu anokoshesa pane izvi kubatsira mabhizinesi kuvaka avo kushambadzira njere.
Chishandiso chandanga ndichishandisa nguva yakawanda chiri muGoogle Data Studio. Nezvemahara bhizinesi ungwaru, kurondedzera, uye dashboard chikuva - iyo yemahara mutengo haigone kurohwa. Nehurombo, nekuti iri yeGoogle, hausi kuzoona vamwe vatambi vachidirana kuti vavake vanobatana navo kune yavo data, zvakadaro. Nekuda kweizvozvo, akati wandei-echitatu-bato mapuratifomu ari kuwedzera. Imwe yeiyo ndeye Kushusha.
Hupombwe hunopa mhinduro nhatu:
Kushupika Datatap - Unganidza data kubva kune akawanda masisitimu uye utumire kune chero kwainoenda nekumisikidza iyo yekuunganidza data, gadziriro uye manejimendi maitiro.
Adverity Insights - Akagadziriswa madhibhodhi anokupa iwe chaiyo-nguva yekutarisa yako kushambadzira uye bhizinesi kuita. Unganidza iyo chaiyo data mune akakodzera madhibhodhi kune vanhu chaivo.
Adverity PreSense - Kushandisa Artificial Intelligence, PreSense inoburitsa pachena mikana yekugadzirisa kuburikidza nekushandisa muchina kudzidza uye advanced manhamba. Nekushandisa kusanzwisisika kwekutsvaga, kuwanikwa kwedata uye kushandisa mazano, makambani anogona kushandura simba rekushambadzira kwavo analytics.
Unganidza uye shanda neyako midhiya, kushambadzira uye e-commerce ecosystems. Neruzivo rwekuzvarwa kumazana e kushambadzira data masosi. Husimbe hunosanganisa yakawanda yakawanda granular dhata kubva kwakasiyana siyana maturusi pane iyo nhunzi. Ivo vakabatanidza zvese: kubva kumari, kusvika kunongedzo-yekutengesa uye data remamiriro ekunze.
Hupombwe hunokupa simba rekutarisa zvakadzama parwendo rwevatengi kupfuura nakare kose. Blend yakambotumirwa data hova kuti uwane yakazara yakazara bhizinesi revatengi vako.
Isa data rako rese pamunwe wako uye ubatsirwe kubva kuwedzera kukuru mukuita basa. Iko hakuna kudikanwa kwekuchinja pakati pemapuratifomu kuti uwane yako data. Hapasisinazve kugadzirira madhata emaseti ekuongorora. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kutarisisa zviwanikwa zvako mukufumura nyowani nyowani uye gadzira yakawedzera kukosha kubva ku data.
Kuisa mari mukushambadzira kunoitiswa nedatha inzvimbo iyo makambani ari kuwana kudzoka kukuru. Zvinoenderana neshumo kubva kuWinterberry Boka uye neGlobal Direct Marketing Association (GDMA), nezve 80% kana vanopindura ona data yevatengi yakakosha pakushambadzira kwavo uye kushambadzira.
Chii chinonzi Data-Inotengeswa Kushambadzira?
Dhata-inotungamirwa kushambadzira ndiyo nzira yekugadzirisa mhando kutaurirana kunoenderana neruzivo rwevatengi. Vatengesi-vanofambiswa nedata vanoshandisa data revatengi kufanotaura zvavanoda, zvishuwo uye maitiro emangwana. Njere dzakadai dzinobatsira kuvandudza zvakasarudzika maratidziro ekushambadzira eiyo akakwirira kudzoka pane investment (ROI).
Eugen Knippel, Kushatirwa
Nyaya Yokudzidza: Sei Mindshare Yakagadziriswa Dhata Kubatanidza & Kuzivisa Kwevatengi
Mindshare Netherlands ndiyo inotsigira yeDutch yekambani yepasirese uye yekushambadzira kambani. Iine vanopfuura vashandi ve7,000 pasirese, Mindshare inokonzeresa ruzhinji rweGroupM neWPP mushambadziro wepasirese wepasirese. Kugadzirisa rakakura rakadai basa, kambani yanga yagara kwenguva refu iri kutsvaga chishandiso chekushambadzira chinogonesa kuunganidza dhata, kubatanidza, uye kutaurira vatengi vayo. Izvi zvinangwa zvino zvasangana, nerubatsiro rweAdverity.
Simbisa KPI Yako
Yakakosha kumakambani emazuva ano anotyairwa nedatha ndiko kushandiswa kwematanho ekushambadzira akaenzana pamatanho ese enhau. Kuyera kuyambuka-chiteshi kushambadzira mashandiro kunoitwa nyore kana paine yakaenzana sisitimu yeese maKPIs. Izvi zvino chengetedza kusagadzikana mukuumbwa kwedata, zvisinei nekuti iro data rinotangira kupi.
Hunyengeri hunopa mukana wekugadzira makuru uye akaomesesa sarudzo dzemepu dzinoenderana ako ese metric metrics kuti iwe ugone kuenzanisa maapuro pamwe nemamwe maapuro akabatana. Izvi zvinobvumidza vashambadziri kusanganisa vese vavanotarisira vateereri kana zvikamu zve data mukati me metric kana chiyero, zvichivabatsira kuti vatore sarudzo dzakashambadza-dzakadzidza nehungwaru hwakabatana.
Bhuka iyo Dhibhodhi Demo
Tags: nhamokushora datatapnzwisiso nzwisisokudzvinyirira presensedata chinongedzodhata zvinyorwazvakanakisisagoogle data studiokuwiriranisaoutbrainSnowflake
Kufuridzira Kushambadzira Statistics